ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအကျင့်ယိုယွင်းသည်ဟုရှုမြင်ရန်၎င်းသည်အထောက်အကူပြုသလော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကငျြ့ပကျြအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုရန်ကူညီပါသလား?
မှန်မှန် relapsing ခံခဲ့ရသူတစ်စိတ်ပျက် porn စှဲလမျးသူ said:
ကျွန်မပင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး John Paul II ကဟာကြီးမြတ်ဒဿနအလုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာ မေတ္တာနှင့်တာဝန်ယူမှု။ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ပေးချင်ရင်ဒါကဒီစာအုပ်ပဲ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမတိုင်မီ porn နှင့်တပ်မက်သောသဘောသည်ကိုယ်ကျင့်တရားမှားယွင်းသည်ကိုအပြည့်အဝသိရှိခဲ့ရသည်။
ညစ်ညမ်းသောနာလန်ထူမှုသည်စံသတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ကျင့်တရားသည်နောက်ပြန်လှည့ ်၍ ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် မင်းက ဦး နှောက်ရဲ့ဓာတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ dopamine dysregulation ။ သင့် ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်အထိခိုက်မခံနိုင်အောင်အချိန်နှင့်တသမတ်တည်းလိုအပ်သည်။ ဒီသဘာဝကုထုံးဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင့် ဦး နှောက်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့လဲလှယ်ခြင်းအားဖြင့်များစွာတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း၊ သဘာဝရှိအချိန်၊ ရင်းနှီးသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါင်းသင်းမှု၊ အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဆုတောင်းခြင်းကိုအောင်မြင်စေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာဝနာလည်းလုပ်နိုင်တယ်။
ဘာ မ ညစ်ညမ်းမှုကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲဆိုတာကိုကူညီနေပုံရတယ်။ အကြောင်းပြချက်မှာ“ မှားယွင်း” သောအရာများကိုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ သင့် ဦး နှောက်သည်အန္တရာယ်များကိုခံစားရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ (၎င်းသည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောမွေးဖွားခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ )
သင်သည်ပြန်လည်ကျင့်သောအခါ (သို့) စဉ်းစားသောအခါ“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမှားယွင်းသော” ထောင့်သည်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ညစ်ညမ်းမှုသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြissueနာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ သင်၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (“ ကိုယ်ကျင့်တရား” ဟူသောအယူအဆကိုနားမလည်နိုင်သော) သည်သင်၏အော်ဂဇင်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုအနာဂါတ်တွင်“ ပိုမိုနှိုးဆွ” စေရန်ပြုလုပ်သည်။
ဒါကြောင့်သင့် ဦး နှောက်ရဲ့ဒီအပိုင်းကညစ်ညမ်းတဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနဲ့အော်ဂဇင်ကိုညစ်ညမ်းစေရုံသာမက၊ ၎င်းသည်သင့်အား 'စိုးရိမ်စိတ်များ' နှင့် 'အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း' ကိုခံစားရန်လည်းဆက်သွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအရ“ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း၊ ဒီညီမျှခြင်းကိုအားဖြည့်လေလေ၊ မင်းရဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းမှာအမြစ်တွယ်ဖို့ကပိုခက်လေပဲ။ Ted Haggard ကဘာကြောင့်အန္တရာယ်များတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုဆက်ပြီးတိုးပွားစေသလဲ။
အမှန်မှာ၊ သင်သည်အလွန်စိတ်ဓာတ်ရေးရာကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် porn မှထုတ်လုပ်သော dopamine နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုစွဲလမ်းစေသည်။ ကာလ။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည်ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်သွားပြီး၎င်းတို့ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်သည်သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ သင်၏နောက်ကွယ်မှထားခဲ့လိုသည့်အပြုအမူအတွက်သင့် ဦး နှောက်ကို“ ဆုချခြင်း” (သို့) သက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏အလုပ်ကို ပို၍ ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရိုးသားပါကသင်ပင်သင်သဘောပေါက်လိမ့်မည် အလိုရှိ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အပြစ်ကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ဖြစ်သည် ပိုပြီးတရားစွဲဆိုနှင့်နှိုးဆွသော။ ဤသည်မှာအထက်တွင်ရှင်းပြထားသောပြtheနာ၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့်အပေါ်ကစားနေသည့်လှည့်ကွက်များကိုသာပြုံးပါ။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကြိုးပြwနာမျှသာဖြစ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မှု 'sin' ၏ထောင့်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းကိုရပ်တန့်စေလိုသည့်ကာတွန်းများ မှလွဲ၍ သင် porn ကို ပို၍ တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ Erotica သည်“ dopamine spurt ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများ” သာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်အားအိမ်ထောင်ဖက်လောင်းများနှင့်ထိရောက်စွာဆက်ဆံနိုင်ရန်သင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှသင့်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေသည်။ ဘာမှပို စီးကရက်အပေါ် puffing နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အကြံပြုချက် - အကယ်လို့သင်က porn ကိုစွန့်ခွာချင်တယ်ဆိုရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့အာရုံပျံ့လွင့်စရာတွေကိုမကြိုက်တာကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ပါ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ယိုယွင်းမှုကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဒါဟာတကယ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအဘယျသို့ပွုနိုငျ တခြားသူတွေနဲ့ပိုပြီးချိတ်ဆက်? (သင်၏ဖန်တီးသူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်စိတ်သက်သာစရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားမထိုက်တန်ဟုခံစားရစေပြီးစိတ်ဖိစီးစေသည့်အပြင်ပြန်ပြုခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ) သင့် ဦး နှောက်အားရှာဖွေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများကို ပိုမို၍ ပေးပါ၊ ဒြပ်စိတ်လှုပ်ရှား။
“ အန္တရာယ်ကင်းသော” ဆိုက်ဘာ Erotica သည်နေရာအနှံ့တွင်ရှိစဉ်ကအိမ်ထောင်ပြုခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်းငံ့ထားရန်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသောယောက်ျားများကိုကျွန်ုပ်တို့စာနာမိသည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူကမစဉ်းစားခဲ့ကြသနည်း သို့သော်ယနေ့ porn မျှော်လင့်မထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဦးနှောက်လေ့.
အမှန်မှာ၊ သင်သည်လိင်ကြင်ဖော်မဲ့သူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါကပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ပရောဂျက်များတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကသင်တန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကိုပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်အားပိုမိုလိုချင်သောဆိုက်ဘာအရော့တ်ကာစ်ထက် ပို၍ သက်သာစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူသိလဲ ???
အကြံပြုချက် - သင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်လွှတ်ပြီးသင့်ရဲ့ရုန်းကန်မှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတစ်ခုထက်မျှတသော ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်အကူအညီကိုတောင်းခံတာကောင်းပါတယ် သို့သော်သင်၏ 'အပြစ်များ' ကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားသင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်မျှတစေရန်တောင်းဆိုပါ။ သင်၏ဖန်တီးသူသည်“ အပြစ်ပြုခြင်း” ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်ထက်စွမ်းအားအပြည့်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်သင့်ကို ပို၍ နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်လိမ့်မည်။
မင်းလိုပဲငါဟာဒီစွဲလမ်းမှုကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတိုက်လှန်ခဲ့တယ်။ 'မှားတယ်' လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတာကငါ့ကိုရပ်တန့်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ မရနိုင်သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလူတစ်ယောက်ဟုထင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည်မပြည့်စုံပါ။ သေချာသောအပြစ်သည်အခြေအနေသုံးခုကိုလိုအပ်သည်ဟုသင်သိထားသည်က - ၁) ၎င်းသည်ကြီးလေးသောကိစ္စဖြစ်ရမည်၊ ၂) သင်မှားကြောင်းသင်သိရမည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူသို့သော်ရွေးချယ်စရာပါဝင်ပတ်သက်မရှိ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အပြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ သင် PMO လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏စွဲနေသည့် ဦး နှောက်သည်သင့်ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ရန်သင့်အားဖိအားပေးနေသည်။
ဤသည်ပြစ်မှားခြင်းနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့်သင်းအုပ်ဆရာ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလမ်းညွှန်ရန်အတွက်ဓမ္မဆရာများအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပိုင်း (၂၃၅၂) တွင်“ ခြွင်းချက်အပိုဒ်” ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ အလေ့အကျင့်၊ စိုးရိမ်စိတ်အခြေအနေများသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူမှုရေးအချက်များကိုလျော့နည်းစေပြီး၊
ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းကကျွန်တော့်ကိုကိုယ့်အကြောင်းအများကြီးပိုခံစားစေခဲ့တယ်။ ငါမတော်တဆစွဲလမ်းရသည့်အတွက်ကြောင့်ငါလူဆိုးမဟုတ်ပါဘူး! သင်သည်ဤအရာကိုအပြစ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ခံနေရသောအောင်မြင်မှုများစွာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကက်သလစ်အုပ်ထိန်းသူများသည် PMO ၏စွဲလမ်းစေနိုင်စွမ်းကိုမသိဘဲနေခဲ့ကြသည်။ ဒီတော့သူတို့ကကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အပြစ်တရားအားဖြင့်သူတို့သိထားသည့်တစ်ခုတည်းသောသင်ကြားမှုကိုသင်ပေးခဲ့သည်။ (ယခုငါစွဲလမ်း၏သဘောသဘာဝနှင့် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်။ ငါတို့လေ့လာသင်ယူနေကြသည်ကိုထင်ဟပ်ဖို့နောက်ပိုင်းမှာ Catechism ၏ထုတ်ဝေ updated လိမ့်မည်ခန့်မှန်းထားသည်။ )
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပတ်သက်သောဤဆွေးနွေးမှုကိုသင်တွေ့ရှိခဲ့ပါက၊ porn ဘာသာရေးလူမြိုးအတှကျပိုကြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သနည်း